Google Mifananidzo inomira ichipa risingaperi yemahara yekuchengetedza | Linux Vakapindwa muropa
Imwe yesarudzo idzo chero sisitimu yekushandisa inotipa, ingave Windows, macOS, Linux kana vamwe, kana uchiwedzera account account iGoogle. Uye, kazhinji, inogona kuuya inobatsira, nekuti ipapo isu tine (kana iwe unayo) maemail, vanobata, zviyeuchidzo kana zviitiko zvekarenda. Asi kambani inozivikanwa yekutsvaga injini ndeye tech hofori uye nekudaro, kutenga akawanda emapurojekiti madiki, anotangisa matsva maficha kana mazano, uye dzimwe nguva anoapedza. Chinhu chekupedzisira chaanourawa Mapikicha eGoogle, kana zvirinani sekuziva kwedu.
Sezvo yakatangwa makore mashanu apfuura, sevhisi takavimbisa kuti tinogona kuisa edu ese mafoto ipapo, yemahara uye isina muganho. Muchokwadi, kana tikabvuma webhu isu tichiri kukwanisa kuona iwo musoro wemusoro wechinyorwa chino pasina kugadzirisa. Izvo zvinogona kuve zvechokwadi izvozvi, asi zvinomira kuva zvechokwadi munguva pfupi iri kutevera.
Chinhu chitsva chatinoisa kuGoogle Mifananidzo chinobira nzvimbo kubva mugore redu
Kunge yakaziviswa nezuro, kutanga rinotevera zhizha, kana zvakanyanya kunyanya munaJune we2021Zvese zvatinoisa kuGoogle Mifananidzo zvinoshandisa nzvimbo muGoogle gore redu, pakati pazvo tine Dhiraivha, Gmail uye mamwe masevhisi, akadai semagwaro. Kana isu tichida mamiriro akafanana sepakutanga, isu tinofanirwa kunyorera kuGoogle One kana kuve nePixel.
Nenhau dzakaipa dzakatopihwa, isu tinofanirwa kutaura chimwe chinhu chichaitira vamwe chinwiwa chichava chinotapira: kana shanduko iri yepamutemo, idzva chete ratinoisa rinobvisa nzvimbo kubva ku15GB kubva mugore. Naizvozvo, kana izvozvi tine, semuenzaniso, 10GB mumifananidzo nemavhidhiyo, gore redu rinogona kuva nepamusoro pe25GB, 15 kubva mugore uye gumi remifananidzo yatakange tagara muGoogle Mifananidzo. Asi chero chatinoisa kana nguva yacho yasvika, haichazovi nenzvimbo yemahara uye isina muganho yakachengetwa
Kune yangu chikamu, ndinofara kuti handisi mushandisi weGoogle Mifananidzo. Ini handidi chaizvo dzimwe shanduko, uye kufanira kutsvaga sevhisi yakafanana, mushure memakore mashanu etsika, ingave iri dambudziko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Google iri kudzoreredza akawanda marongero ayo, asi Google Mifananidzo inogona kunetsa
Uye iwe unoshandisa chero imwe nzira kune google mifananidzo?
Iko kune chimwe chinhu chakavhurwa sosi?
Chinhu chatinogona kuvaka kumba BBB?